महाकुलुङ गाउँपालिकामा रहेको एभरेष्ट बैंकका कर्मचारीबाटै सेवाग्राहीको खाता असुरक्षित - Shikhar Sandesh
खातावालालाई थाहै नदिई सेयर कारोबार गरेको खुलासा
अजय अलङकार रोतेम्बु ३१ श्रावण २०७८, आईतवार ०४:०४
सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकामा शाखा कार्यालयका रुपमा सञ्चालनमा आएको एभरेष्ट बैंक, महाकुलुङ शाखाका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई थाहै नदिई सेवाग्राहिको खाता प्रयोग गरेर सेयर कारोबार गरेको पाईएको छ । कार्यालयका कर्मचारीले लामो समय देखि उक्त बैंकमा खाता रहेका स्थानिय सेवाग्राहीको नामबाट सेयर कारोबार गर्दै आएको पाईएको हो ।
केहि समय अघि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं ५ निवासी झलक कुलुङ राईको एभरेष्ट बैंक महाकुलुङ साखाको खाता नम्बरमा ५ हजार जम्मा भयो । खातावाला कुलुङ कहाँबाट जम्मा भयो भनेर आफै अचम्म परे । उनले सम्झे पहिले जम्मा गरेको पैसाको म्यासेज अहिले आई रहेको रहेछ । पुन. केहि दिन पछि उनको खाताबाट ५ हजार काटियो । जुन बेला पनि उनी अचम्ममा परे । गाउँमा सामान्य खेतीपाति गरेर बसेका उनी केहि वास्ता गरेनन् । तर केहि दिन अघि झलक कुलुङको मोवाईल नं. मा एककासी ब्रोकर नम्बर आयो । उक्त ब्रोकर नम्बर आएको केहि समयमा एभरेष्ट बैंक महाकुलुङ साखाका एक कर्मचारीले फोन गर्छन ।
तपाईको नम्बरमा केहि म्यासेज आयो ? फरवार्ड गर्नुसन कस्तो आयो ? गाउँमा सामान्य लेखपढ गरेका कुलुङले उक्त म्यासेज फरवार्ड गरिदिए । म्यासेज थियो सेयर किन्बेच गर्न मिल्ने ब्रोकर खाता । उक्त म्यासेज फरवार्ड गरेको केहि दिन पछि अर्थात जुलाई ३० (शुक्रबार, साउन १५,२०७८) का दिन झलक कुलुङको खाता नम्बरमा एक्कासी २२ हजार ८ सय ६० रुपैया जम्मा भयो । खातावाल कुलुङ तीनछक्क परे कहाँबाट यत्रो पैसा जम्मा भयो भनेर । लगत्तै अगष्ट २ अर्थात साउन १८ गतेका दिन उनको खातामा रहेको रकम मध्ये १७ हजार ६ सय ५० रुपैया कटौती गरेको म्यासेज आयो । अनि बल्ल थाहा हुन्छकी, महाकुलुङ साखामा कार्यरत कर्मचारीलेनै आफ्नो खाता प्रयोग गरीरहेका रहेछन् भनेर । पैसा कस्ले कटाएका रहेछन यो म्यासेज हेर्नुहोस ।
त्यसपछि सेवाग्राहि कुलुङ बैंकको सम्पर्कमा जाँदा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले अहिले सम्म आफुले चलाएको र आगामी दिनमा तपाई आफै चलाउनुस भनेर आफुलाई सम्झाउने प्रयास गरेको खातावाला झलक कुलुङले बताउनु भयो । कटौती भएको १७ हजार ६ सय ५० रुपैया भने बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले ५० कित्ता सेयर बेचेका रहेछन् । लामो समयदेखि एभरेष्ट बैंक महाकुलुङ साखाको सेवा प्रवाहमा अत्याधिक गुनासो आई रहेको वेला कार्यालयको कर्मचारीबाटै यो हर्कत हुनुले कार्यालय प्रतिको विश्वासमा थप संका पैदा भएको छ । किनकी झलक कुलुङ एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । जो सँग मोवाईल बैंकिङ थियो । तर अन्य मोबाईल बैंकिङ प्रयोग नगरेका सर्वसाधारणको खाता नम्बर कतिको प्रयोग गरि रहेका छन् भन्ने संकाको सुविधा भने तपाई हामी जो सुकैलाई रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सेवा ग्राहिको गुनासो
केहि समय अघि महाकुलुङ ४ निवासी सुवास कुलुङले आफ्नो डिम्याट खाता खोल्नका लागि बैंकका कर्मचारी सँग भनाभननै गर्नु परेको गुनासो गर्नु भयो । डिम्याट खाता खोल्नका लागि बैंकका कर्मचारीले आफ्नो बाबुको सम्पत्तिनै दिन लागेझै गरेको र बाल बचत खाता खोल्नका लागि आवश्यक प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदा आफुलाई सीस्टम नै थाहा नभएको बताएका थिए ।
महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नं. ४ निवासी विपीन कुुलुङले आफ्नो बुबाको डिम्याट खाताको लागि फम भरेको ४ महिना विती सक्दा पनि अझै नदिएको गुनासो गर्नुभयो । केहि दिन अघि बैंकको सम्पर्कमा जाँदा डिम्याट अकाउन्टको चाप डेढ दुई सय ओटा रहेकोले दशै पछि मात्रै हुने जवाफ दिएको बताउनु भयो । तर उता हेड अफीस लाजिम्पाटले भने एक हप्ता भित्रै जो सुकैको डिम्याट खाता खोलि सकिने बताएको छ ।
महाकुलुङ ४ निवासी मोतीराम रसाईली गाउँपालिकाको केन्द्र गई रहने ब्यक्ती हुन् । उनले बाबाको नाममा खाता र डिम्याट खाता खोल्नु थियो । केके कागजात चाहिन्छ भनेर साधेका थिए । तर कार्यलयको जवाफ थियो पहिले बुवालाई लिएर आउनुसन । उहाँले भन्नु भयोे, बाबालाई लिएरैत आउने हो । केके कागजात चाहिन्छ ? ठाडो र तुच्छ शैलीको जवाफ थियो “ बुबाको नाममा किर्ते गर्न खोजेको ?
जोकराज कुलुङले अप्रिल २ मा आम सर्वसाधारण सेवाग्राहीको साझा गुनासोलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हाकीम साप शिर्षकमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन् ।
५. सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फोनिबु दिनेश कुलुङ नाम रहेका साथी ठोकुवाको साथ भन्छु यो खराव नियत नै हो भन्दै यस्तो लेख्नु हुन्छ ।
७. जोकराज कुलुङको कमेन्ट बक्समा टाईफुन प्रदिप नाम गरेका ब्यक्ती चेक दिन समेत आनाकानी गरेको भन्दै यसरी गुनासो गरेका छन ।
८. त्यस्तै जोकराज कुलुङकै कमेन्ट बक्समा पि.डि कुलुङ नाम गरेको साथीले यसरी लेख्नु भएको छ ।